Colaada Tukaraq: Waa mid u dhaxaysa Xuddun vs Taleex – make music movie Edition: International | Video
Published On: 9 June 2012 7:45 pm Editors Choice / Wararka | By Taleex Media Colaada Tukaraq: Waa mid u dhaxaysa Xuddun vs Taleex
Deegaamada Nugaasha ee gobolka Sool waxaa ka aloosan xiisad colaadeed taaso u dhaxaysa beelaha Xuddun iyo Taleex.
Xiisadan colaadeed oo ka bilaabatay siyaasyiin is ka soo akal jeeda labada beel oo ka wada tirsanaa Puntland ayaa hada u soo daadegtay dhinaca beelaha ka dib markii mid ka id aha siyaasiyiintaa uu xaska la galay dhinaca beeshiisa.
Wararkii u dambeeyay ayaa sheegaya in xiisada colaadu ay marayso meehsii ugu saraysay ka dib markii muddo la isu hub uruursanayay.
Axmed Karaash iyo beehsiisa oo taagero ka helaay Yagoori iyo Saaxdheer ayaa dhawaan qabsaday magaalaad Tukaraq iyagoo nin ku dilay dhawr kalana ku dhaawacay.
Horay waxaa uu Axmed Karaash uga qayb qaatay dilal qorshaysan oo ka dhan ahaa reer Taleex hase ahaate xiligan wuu caddeysatay mawqifkiisa.
Tuulada laamiga ku taala ee Falayadhyaale waxaa isku uruursanayay todobaadkan ciidan beeleedka reer Taleex iyagoo qorshahoodu yahay sidii ay Karaash iyo beeshiisa uga saari lahaayeen Tukaraq.
Sida cad colaada ka aloosan Nugaal waa mid u dhaxaysa beelaha reer Xuddun iyo Taleex waxaana jira laba beelood oo iyagu ku biiray colaadan ka dib markii ay la safteen beesha Axmed Karaash.
Beelaha Yagoori iyo Saaxdheer oo labaduba deegaamadooda uu ka taliyo maamulka Soomaalidiidka ayaa si cad u la saftay beesha Xuddun ka dib marki ay maal mihii la soo dhaafay gaadiid dagaal u soo direen maleeshiyaadka Axmed Karaash hogaaminayo.
Beesha Saaxdheer waxaa ay soo dirtay laba gaari oo ku dagaalka ah iyo gaadhi maleeshiyaad sida kuwaaos ku biiray maleeshiyada reer Xuddun waxaa sidoo kale xalay ku soo biiray afar gaadhi oo kuwa dagaalka ah oo ay leedahay beesha Yagoori.
Labada Beelood ee Saaxdheer iyo Yagoori waa beelihii qaybta weyn ka qaatay gacan gelinta Laascaanood hadana ku haya maamulka Soomaalidiidka Laascaanood.
Ma jirto cid waaan waan ka dhexwadaa beelaha Xuddun iyo Taleex maadama uu qorshahan ahaa mid 40 sano ka badan ay ku taamayeen rag siyaasiyiin ah in ay arkaan colaad ka aloosanta Nugaal.
Maleeshiyaadka beelaha Xassan Ugaas iyo Gaboobe ayaa la xaqiijiyay in aysan diyaar u ahayn in ay ka qayb qaataan colaad sokeeye halka kuwa Saaxdheer iyo Yagoori sheegeen in ay diyaar u yihiin ka qayb galka dagaalka iyagoo intaa raaciyay in ay teegeero ciidan ka helaayan maamulka Soomaalidiidka haddii lagaga adkaado Tukaraq.
Odaayaasha reer Taleex oo maalmihii u dambeeyay waday in la baajiyo dagaal ka dhex qarxa Xuddun iyo Taleex ayaa si weyn uga cadhooday warkii beenta ahaa ee uu faafiyay Karaash ee uu ku sheegay in uu Yacooda tagay taaso ay u micnaysteen in aan diyaar u ahayn nabad galayo una soo tafa xaytay colaad sokeeyee.
Axmed Karaash waxaa uu haystaa gadiid ay qurbajooga Naaleeye Axmed u iibiyeen in Laascaanood cadwga lagaga saaro gadiidkaas oo la iibiyay sanadii 2007 ayaan galin wax dagaal ah haddii xaalada hada ka alosan Nugaal isu rogto gacan dagaal waxa ay noqoysaa markii u horaysay ee dagaal galaan kaaso ah mid ka duwan kii loo soo iibiyay.
Gaadiidka Dagaal ee Tukaraq Ku Sugan iyo sida loo kala lee yahay.
Tirada Qabiilka Iska Leh
8 gaadhi Bihidarays
5 Gaadhi Jaamac Siyaad (reer Warsame & Caafi)
3 Gaadhi Bahararsame (reer G cali)
2 Gaadhi Gaboobe
2 Gaadhi Xasan Ugaas
Waxaa Tukaraq ka baxay laba gaadhi oo dagaal ah kuwaas oo ay lahaayeen qoys ka mid ah reer Taleex kuwaaso markii hore aad u taageersanaa fikrada Khaatumo balse hada ogaaday in ay isu rogtay Khiyaano.
Jaaliyadaha dibada oo aan xog badan ka ahayn waxa ka socda dalkii ayaa laga dhaadhicinayaa in Nugaal ay ku dagaalamayaan laba maamul iyadoo shalay mareegaha beenta loo soo dhigay Axmed Karaash ayaa “Tuulada Yoocada Tagay” warkaasi in uu been cad yahay waxaa u daliil ah laba arimood:-
Wadada laamiga kuma taalo tuulo la yiraahdo Yoocada
Haddii ay dhab hayd oo uu tagay muxuu Axmed Karaash saaka ergada ugu dirsaday waxgaradka Nuur Axmed ee ku sugan Falaydhyaale oo ah tuulo ku taala laamiga dhinaca Garowe ka xigta Tukaraq.
Xiisada colaadeed ee ka taagan Nugaal waxaa ay u dhaxaysa beelaha Bihidarays iyo Nuur Axmed ninkii dhaqaalo u diraa Karaash oo ku marmarsiyooda maamul ayaan lacag siinayaa ogow waxadaa ka qayb qaadatay colaada labadaa beelood.
Beelaha gaadidika dagaal ka joogaan Tukaraq oo la safan beesha Axmed Karaash ogaada haddii ay colaadaasi gacanta ka baxdo beri kama noqon kartaan dhexdhexaad ama guurti taariikhadanaa qori doonta.